Daawo Sawirada: Muqdisho oo lagu soo bandhigay Rag si farsameesan dadka ku dhici jiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daawo Sawirada: Muqdisho oo lagu soo bandhigay Rag si farsameesan dadka ku dhici jiray
23rd January 2018 A warsame Af Soomaali 0
Waxaa maanta Degmada Kaxda ee gobolka Banaadir lagu soo bandhigay labo nin oo la sheegay in si farsameesan lacago uga qaadanayeen dad barakacayaal ah oo kunool xero degmadaasi kutaala.
Ciidamada amaanka degmada Kaxda ayaa gacanta kusoo dhigay labadan nin iyo gaari ay wateen xili ay ku sugnaayeen xero barakac, waxa ayna ragaan wateen kaarar been abuur ah ay ku sheegeen kuwa qaxootiga loo qeybinayo raashin.
Gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil ayaa sheegay in ciidamada amaanka gacanta kusoo dhigeen labo nin oo sameestay kaarar been abuur ah ay ku qoran yihiin Astaanka Gobolka Banaadir iyo Calanka dowladda Imaaraadka Carabta.
Ragan ayuu sheegay Gudoomiyaha in dadka barakacayaasha ah lacago uga qaadanayeen in ay siinayaan kaarar ay bishii ku helayaan raashin, waxa uuna tilmaamay in kaararkaasi ahaayeen kuwa aysan waxbo ka jirin.
” Labadan nin aan soo qabanay waxa ay wateen kaarar been abuur ah oo dadka ugu sheegayeen in bishii lagu siinayo lacag iyo raashin, waxa ayna ka dalbanayeen qofka rabo in kaarka la siiyo lacag ” Ayuu yiri Gudoomiyaha Kaxda.
Labadan nin ee lasoo bandhigay ayaa mid kamid ah sheegay in uusan wax shaqo ah ku laheyn arintan kaliyana uu ahaa darawal lasoo kireestay, waxa uuna tilmaamay ninka la socda in uu howshan masuul ka ahaa.
Maxamed Cabdi Maxamed oo ah ninka ku eedeesan in kaararka been abuurka ah dadka lacagta uga qaadayay ayaa sheegay in uu yahay qof horay Shaqooyin badan uga soo qabtay Hay’addo kala duwan oo dadka barakacayaasha ah quudin jireen.
Ninkan ayaa xusay in rag kale howshaan usoo direen ayna uga dhigeen mid sax ah kaararka, waxa uuna tilmaamay in ragaasi uu garanayo uuna diyaar u yahay in uu tuso laamaha amaanka si loo soo qabto.
Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan dad badan oo si xirfadeesan dadka ku dhaca iskana dhiga in ay yihiin dad caawinaya dadka masaakiinta iyo waliba kuwa barakacayaasha ee kunool xeryaha qaxooti ee kuyaala Muqdisho iyo duleedkeeda.
Dekadii Hobyo oo la dhagax dhigay iyo wada gash ethiopia